QA65Q8CAMK | QA65Q8CAMKXMR | Samsung MM
Q Colour with 1500 HDR Curved Screen with Boundless Design Smart TV
"ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Quantum Dot နည်းပညာက ဆန်းသစ်တဲ့ alloy material ကိုသုံးပြီး အရောင်ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မကွယ်ပျောက်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရစေမှာပါ။"
တီဗွီတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အတွေးကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် အရောင် ကမ္ဘာကြီးမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ Q8C’s wide colour range က ဘာနဲ့မှ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါမြင်ဖူးတာနဲ့ သိမှာပါ။
Q8C က ပိုမို နက်ရှိုင်းပြီး ပိုမို ထင်ရှားတဲ့ contrasts တွေနဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ် ကြည့်ရှုမှုကို ရစေပါတယ်။ ဘယ်ချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်က မြင်ကွင်းတိုင်းနဲ့ စီးဝင်နစ်မြောနေလိုက်ပါ။
သူများတွေ မကြည့်နိုင်တာကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါရိုက်တာရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အမှောင်ရိပ်ထဲမှာ ပုန်းပြီး (သို့) အလင်းထဲမှာ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေကာ မြင်ကွင်းတိုင်းမှာ နစ်မြောလိုက်ပါ။
အမြင့်ဆုံး အလင်းရောင်သည် တီဗွီရဲ့ အရွယ်အစားနှင့် မော်ဒယ်လ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသည်။
အရောင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် တူညီတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ Q8C ရဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ ကြည့်ရှုရမယ့် ထောင့်ချိုးတွေနဲ့ဆိုရင် ထိုင်ခုံတိုင်းက အကောင်းဆုံး ထိုင်ခုံပါပဲ။
ပြည့်စုံတဲ့ မြင်ကွင်းကို ရရှိစေမယ့် အားအကောင်းဆုံး အင်ဂျင်။ အကြောင်းအရာကို လေ့လာပြီး အကောင်းဆုံး ပုံအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းဖို့ Q engine က အရင်ကထက် ပိုမြန်နေပါပြီ။
"ရိုးရှင်းမှုနဲ့ ခေတ်မီမှုကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အလှ။ ထောင်ပဲထားထား၊ နံရံမှာပဲ ကပ်ထားထား၊ Q8C ချောမွေ့တဲ့ နောက်ကျောက ကြိုးများကို မမြင်ရဘဲ လှလှပပ ချိတ်ဆွဲထားလို့ ရစေမှာပါ။"
သင့်နေရာကို အကြိုးရှိစွာ အသုံးချပါ။ မမြင်ရလောက်နီးပါးဖြစ်တဲ့ ကြိုးတစ်ကြိုးထဲနဲ့ စက်တိုင်းကို ကြိုးများ ရှုပ်ထွေးမှု မရှိဘဲ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ။ ကိုယ်ပျောက် ချိတ်ဆက်မှု။
‘Invisible Connection’ ဆိုသည်မှာ အပြင် ကြိုးများကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ One Connect Box ကို ကြိုးတစ်ကြိုးထဲနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတာကို ပြောတာပါ။ ဒါဟာ တီဗွီကြိုးက အခြားစက်များကို ဆက်သွယ်ထားတာကို မဆိုလိုပါ။
တီဗွီကို ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ ထားလိုက်ပါ။ ချောမွတ်တဲ့ နောက်ကျောပြင် ဒီဇိုင်းက ကြိုးများကို အတွင်းတွင် မြှုပ်ထားသည်။ နောက်ကျောဘက်တောင်မှ ရိုးရှင်းခေတ်မီပါတယ်။
Q8C က ကြားတွင် နေရာလပ်မရှိဘဲ နံရံတွင် လှပကပ်ရပ်စွာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘက်က ကြည့်ကြည့် သင့်ဧည့်ခန်းဟာ လှပတင့်တယ်နေမှာပါ။
တီဗွီရဲ့ ထောင့်စွန်းမှ တိုင်းလျှင် တပ်ဆင်မှုနှင့် နံရံပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။
အလှဆင်မှုတိုင်းအတွက် လိုက်ဖက်သော ဒီဇိုင်း။ ထောင့်စွန်းများကို မမြင်နိုင်တဲ့ မျဉ်းပြိုင်ကျသော နစ်မြောမှု။ လှပသေသပ်သော နောက်ကျောပြင် သတ္တုဒီဇိုင်း။ ဒါနဲ့တူတာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။
သင့်အခန်းထဲကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ လေးဘက်လုံးမှာ ဘောင်မပါတဲ့အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရစေပါတယ်။ သင့်မျက်စိရှေ့မှာ အသက်ဝင်လာတဲ့ မြင်ကွင်းများကို ကြည့်လိုက်ပါ။
သန့်ရှင်းချောမွတ်သည့် Q8C ရဲ့ သတ္တုနောက်ကျောပြင်က အိမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လှပနေစေမှာပါ။
သဘာဝမြင်ကွင်းတွေအတွက် လှပသော ကောက်ကြောင်း။ Q8C ရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှက အခြားဒီဇိုင်းများနဲ့ မတူတဲ့ လှပတင့်တယ်မှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
အခုဆိုရင် တကယ် အေးဆေးထိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီပေါ့။
*Netflix streaming membership လိုအပ်သည်။
သင့်လက်ထဲမှာပဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ကိုင်ထားလိုက်ပါ။ စက်အားလုံးကို emote control တစ်ခုထဲသုံးပြီး ထိန်းချူပ်နိုင်ပါပြီ။ Voice Control နဲ့ဆို channels တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အရာအားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။ One Depth က မျက်နှာပြင်တစ်ခုထဲမှာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို စုထားနိုင်ပါပြီ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းဆီအတွက် လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အရင် thumbnail previews ကို စစ်ကြည့်ရန်။
ချိတ်ဆက်ထားသော စက်များကို မြန်မြန် ရှာပြီး ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ။ QLED TV က အလိုအလျောက် စက်နာမည်ကို ဖော်ပြပြီး တစ်ခဏအတွင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ။
စက်များကို HDMI cable ကို သုံးကာ One Connect ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်။
ဖုန်းကို သင့်တီဗွီနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကြိုက်ရာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ Smart View app နဲ့ဆိုရင် ဖုန်းကနေ အားလုံးကို အတားအဆီးမရှိ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီပေါ့။
Android 4.1 နှင့် အထက်၊ iOS7နှင့် အထက်၊ Windows7နှင့် အထက် စက်များအတွက်သာ ရသည်။ Marvel Studios ရဲ့ Doctor Strange, Captain America: Civil War နှင့် အခြားဇာတ်ကားများကို Google Play Movies & TV တွင် ကြည့်လိုက်ပါ။ © 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC. © 2016 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Marvel Studios’ Captain America: Civil War © 2017 MARVEL. The Girl on the Train © 2016 Universal Studios. Suicide Squad TM & © DC Comics. © 2016 WBEI. All Rights Reserved.
Q Series 8
Remote Controller Model TM1790A+TM1240A